Cusbooneysiinta cusub ee Telegram waxay ku dareysaa soo degsasho toos ah iyo dib u ciyaarista fiidiyowyada | Androidsis
Ficil ahaan tan iyo markii Telegram ay timid suuqa, inbadan oo naga mid ah ayaa ahaa isticmaaleyaasha bilaabay inay adeegsadaan, xaqiiqda kaliya ee ah isku dayga inaan arko sida ay u shaqeyso iyo waxa ay na siisay. Waxaan si dhakhso leh u awoodnay inaan xaqiijino taas kala duwanaanta ay na siisay iyada oo la siinayo codsiyada dhammaan nidaamyada deegaanka, sababta ugu weyn ee inbadan oo naga mid ahi gacmo furan ku soo dhoweyno.
Tan iyo markaas, dalabku wuu sameeyay oo keliya kudar sifooyin cusub si aad u sii wanaajiso wixii horey u ahaa app kaamil ah dhammaan isticmaaleyaasha saacadaha badan ku qaata kumbuyuutarka hortiisa waana inay si joogto ah ula wadaagaan nooc kasta oo faylal ah. Telegram ayaa hadda la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo laba hawlood oo cusub oo aad u xiiso badan oo aan hoos ku faahfaahinayno.
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho Telegram, waxay u badan tahay inaad ku qoran tahay kanaallo ama kooxo kala duwan oo macluumaadka lagu wadaago, ha ahaato qoraal, muuqaal ama qaab muuqaal ah. Marka laga hadlayo fiidiyowyada, waxay kuxirantahay qaabeynta aan dhidibada u aasnay, fiidiyowga si toos ah ayaa loola soo bixi karaa, taas oo nagu qasbeysa inaan gujino thumbnail si aan u ciyaarno. Taasi waxay ahayd illaa hadda, tan iyo markii la cusbooneysiiyay ugu dambeysay, markaan gaarno halka fiidiyowgu ku yaal, kan waxay bilaabi doontaa inay si toos ah u ciyaarto.
Shaqada soo dejiso iyo dib u ciyaar si toos ah ayaa loo naafoobi karaa gebi ahaanba, suurtagalnimada noo oggolaaneysa inaan ku badbaadinno xaddiga xogteenna, haddii aan weli ku jirno heerarka 2 ama 4 GB.
Riwaayad kale, waxaan ka helnaa fursado cusub oo aad ku baxdo. Adiga oo gujinaya xulashadan, fursado kala duwan ayaa la soo bandhigi doonaa, xulashooyin la waafajinaya isticmaalka suurtagalka ah ee aan ka sameyno adeegga aan dooneyno inaan sameyno.
Haddii aadan weli ku dhiirrigelin inaad tijaabiso Telegram, waxaad si toos ah uga soo dejisan kartaa xiriirka aan ka tago hoosta oo aan iska qoro kanaalka bulshada Androisis, meesha aad ka heli karto talooyin, tabaha, casharrada…. Waxa kale oo aad ku joojin kartaa maqaalkan kale halka aan ku tusno shan xeeladood oo loo habeeyo Telegram ama sidoo kale waxaad ka heli kartaa inta ugu badan adoo og kuwaas oo ah bots-ka ugu fiican Telegram ee maqaalkan kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Cusbooneysiinta cusub ee Telegram waxay ku dareysaa kala soo bax otomaatig ah iyo muuqaal fiidiyowyo ah